Real Madrid Oo Xiiseyneysa Inay Lasoo Saxiixato Xiddig Ka Tirsan Kooxda Sevilla
HomeWararka Ciyaaraha MaantaReal Madrid oo xiiseyneysa inay lasoo saxiixato xiddig ka tirsan kooxda Sevilla
May 4, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Real Madrid ayaa qorshaynaysa sidii ay Jules Kounde ugala soo wareegi lahayd kooxda Sevilla xagaaga. Los Blancos ayaa isha ku heysa inay lasoo saxiixato daafac dhexe xagaaga waxayna u aragtaa ciyaaryahanka reer France dookha ugu fiican.
Sida laga soo xigtay AS, Jules Kounde ayaa noqday bartilmaameedka daafaca # 1 ee Real Madrid. Waxay horay ula soo saxiixdeen David Alaba sida ay sheegayaan wararka laakiin waxay raadinayaan inay ku soo daraan daafacyo badan xagaagan.
Chelsea, Manchester United, Barcelona iyo Manchester City ayaa lala xiriirinayay Jules Kounde, laakiin midkoodna kooxaha uma dhaqaaqin. Wararku waxay soo jeedinayeen in ninka reer France uu heshiis la galay inuu ku biiro City xagaagii hore, laakiin uusan ka suura galin dhanka Sevilla.
Agaasimaha Sevilla Monchi ayaa qirtay xagaagii lasoo dhaafay inay heleen dalab muhiim ah oo ku aadan Jules Kounde. Si kastaba ha noqotee, ma aysan dooneynin inay wax ku iibiyaan khidmadda loo soo bandhigay iyagoo diiday heshiiskaas.